“Qaxootiga halagama mamnuuco mudaharaadka oo xeryaha yaysan soo dhaafin” | Somaliska
“Qaxootiga halagama mamnuuco mudaharaadka oo xeryaha yaysan soo dhaafin”
Dood weyn ayaa Sweden ka dhalatay isbuucaan oo ku aadan xuquuqda qaxootiga aan wali sharciga qaadan iyo kuwa aan lahayn baasaboorka Swedishka. Xisbiga SD ayaa soo jeediyay in qaxootiga laga mamnuuco in ay mudaharaadyo ka dhigaan Sweden ka dib markii ay isbuucii hore dhowr boqol oo qof isugu soo bexeen baarlamaanka hortiisa.
Kent Ekeroth oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka SD ayaa sheegay in qaxootiga aysan yeelan karin xuquuq la mid ah kuwa dadka muwaadiniinta ah, oo sidaa darteed laga mamnuuco in ay mudaharaadyo ka dhigaan wadanka ilaa inta ay ka noqonayaan Swedish. Waxa uu intaasi ku daray in kuwa aan wali sharciga lahayn lagu haayo xeryaha oo aan lagu fasixin wadanka inta ay go’aan ka helayaan. Isagoo ku tilmaamay in ay qatar ku yihiin amaanka wadanka.
Hadalka ku saabsan mudaharaadka ayaa waxaa cambaareeyay quburada sharciga iyo xisbiyada kale, iyadoo lagu tilmaamay mid ka hor imaanaysa dastuurka wadanka iyo dimoqraadiyada maadaama shaqsi kasta oo bani’aadam ah uu xaq u leeyahay in uu mudaharaad ka qeyb qaato.
Arinta kale ee ku saabsan in qaxootiga lagu hayo xeryaha ayaa lagu tilmaamay mid aan macquul ah, oo sidoo kale ka hor imaanaysa xuquuqdooda.
Sidee u aragtaa in qaxootigu ay mudaharaad dhigaan?
Gabadh Muslim ah oo ku jirta dadka ku guuleystay bilada Nobel Peace Prize
Mudaharaadkii isbuucii hore muxuu ku saabsanaa ?! Ma maqal
Reer xamar says:
August 8, 2016 at 14:01
Wuxuu ku saabsanaa inaan Qabiilaysiga sii wadno.. Wadanka naloo maamulo ..
4.5 dhaqankeena noqdo.. Ceer nolol ka dhigano.. Faqri iyo jaahil inaan isugu dardaarano
August 8, 2016 at 15:01
waaba fiicnaan lahayd hadaan haba xumaatee aan arin isugu imaaneyno oo arin soomaali ka dhexeyso si wada jira uga tashankari lahayn lkin reer xamarow been baad sheegtay
August 8, 2016 at 15:12
Reer xamarow sxb keey saa runtaa… Xalaal Qutana waa tihiin
August 8, 2016 at 15:37
waa wax fican in ay rayigooda soo gudbiyaan kuwa leh makasoo bixi karaan xeryahoodana waa kuwa kasoo horjeedo qaanuunka wadanka
August 8, 2016 at 17:18
Waba sheko kale iga da ciyarta cml
Jimcaale masaajidka ciyaarta ka daa
August 8, 2016 at 22:21
Horta waxaaba la yaabanahay umadan lafahooda u banaanbaxaysa maxay calanka wadankeena mar waliba ugu bahdilaan midaharaad iyo meel aanu u qalmin yaan la ceebayn calanka sharafta leh oon la hoos dhigin calamo la mid ah isagaaba wax walba nooga qiimo badan maa lagu qaraabanayaa walhi umadaha kale we wadanka nala dagani shaqsiyan ayay u banaanbaxaan ee ma soo qaataan calamada wadanadooda sababtoo ah bahdil uma ogola somali ayay noqotay mudaharaad waliba waa ay wataan calanku muxuu dhimay qoraxda iyo barafka halaga xareeyo calankeena qiimaha leh layrta haloo daayo
Afsomaaliga iska sax qalad ayaa ku jira jumladaas.
(Arinta kale ee ku saabsan in qaxootiga lagu hayo xeryaha ayaa lagu tilmaamay mid aan macquul ah, oo sidoo kale ka hor imaanaysa xuquuqda)